Isililo sosomabhizinisi boHlanga ngezimbiwa – Ubukhosi
Home/ Ubukhosi noMhlaba/Isililo sosomabhizinisi boHlanga ngezimbiwa
Isililo sosomabhizinisi boHlanga ngezimbiwa
Ubukhosi News May 5, 2016
UMnu uBheki Chamane, uMnu uMbulelo Buthelezi noMnu uBuhle Dlamini beneka usizi lwabo
SEKUPHINDE kwaqubuka ezinye izikhalo kosomabhizinisi boHlanga KwaZulu-Natal, manje bakhala ngokukhishwa inyumbazana ngosomabhizinisi bamaNdiya embonini yezokumbiwa kwesihlabathi nenkwali.
Lokhu kulandela ngemuva kokuthi abaholi benhlangano yabamnyama kule mboni yezimbiwa, Ubumbano Logistix bekhwele badilika ezinkampanini ezinkulukazi KwaZulu-Natal kanye nezitolo zempahla yokwakha ezithenga isihlabathi nenkwali ukuthi zihlangane nosomabhizinisi bamaNdiya ukukhiphela ngaphandle aboHlanga kule mboni.
Okhulumela, Ubumbano Logistix, uMnu uBheki Chamane utshele iBAYEDE ukuthi sekubami emphinjeni okwenziwa ngamaNdiya nalezi zinkampani kosomabhizinisi boHlanga kangangoba sebehlela ukuqalisa imikhankaso yokugovuza umphakathi ngenhloso yokukhipha ngoshova zonke izinkampani zamaNdiya ezimba isihlabathi ezindaweni zaMakhosi.
“Sikhathele mfowethu ukudlala amaNdiya asesiqhwage asephuca kwasayona le mvushwana yomnotho thina abamnyama esesisele nayo njengoba ekwenzile nakweminye imikhakha okubalwa kuyo imboni yezokuthutha njengoba nayo iqhoqhobelwe yiwo. Ngemuva kokuqhwaga aboHlanga amabhasi abo.”
UMnu Chamane uqhuba uthi: “Thina boHlanga siphinde saphoqeleka ukuba sivale izitolo zethu ezinye saziqashisa ngenxa yokuthi sekugcwaliswe amatuckshop namakhonteyina aphethwe ngabokufika base-Africa nabo osekuvela ukuthi basebenzela amaNdiya namaSulumane.”
UMnu uBuhle Dlamini obenoxhaxha lwamathilagi nogandaganda bohlobo oluphambili bokumba isihlabathi uhambe emagameni kaChamane ethi naye usephoqeleke ukuba adayise zonke izimpahla zakhe zokusebenza okubalwa kuzo ogandaganda namathilagi ngenxa yokweswela umsebenzi ngoba kuvimbe amaNdiya.
“Bekungasangisizi ukuqhubeka nokuzigcina lezi zimpahla zami okubalwa kuzo ogandaganda namathilagi ngoba bekungasangenisi nzuzo ekubeni ekugcineni kumele futhi ngikuthelele ngenkulu imali,”
UMnu uDlamini uqhuba uthi: “Ngisho nelayisense sengiphoqeleke ukuba ngingabe ngisayivuselela ngoba kuyabiza ukuyithola ekubeni ungezuthola msebenzi.”
Izikhondlakhondla zezinkampani abazikhomba ngenjumbane ukuthi zihlangene nosomabhizinisi bamaNdiya ukukhipha inyumbazana aboHlanga kubalwa inkampani yakwaLafarge Pty Ltd, eyakwa-Afro Sands neMetier Mixed Concrete Pty Ltd. “Uma thina abamnyama sithi sizobadayisela izihlabathi noma umgubane bavele bathi kumele singene ngaphansi kwezinkampani zamaNdiya okuyizo bona abanezivumelwano nazo. Manje nazo lezi zinkampani zamaNdiya ziyasixhaphaza ngoba zifike zisikhokhele imali encane ngethilagi bese zona isihlabathi noma umgubane zikudayise ngetshe lemali.”
Ngokusho kukaMnu uDlamini uthi amakhiyubikhimitha amahlanu (5m3) ethilagi eligcwele lesihlabathi somfula (river sand) bakhokhelwa imali esukela ema-R600 kuya kwangama-R800 ekubeni zona lezi zinkampani zamaNdiya ebese zikudayisa nge-R1468. Kuthi isihlabathi sokwakha sona asidayise nge-R1438. Kuthi isihlabathi sokupulasitela sona basidayise nge-R1750.
“Ngisho nezitolo ezidayisa impahla yokwakha nazo ziyasixhaphaza ngoba zisikhokhela amakinati kodwa bese zona zenza enkulu imali ngesihlabathi esisuke simbiwe ngemishini yethu. Thina sigcina singene enkingeni yokufelwa yimishini kanye nokuyilungisa ngoba kudla enkulu imali. Kanti futhi sibhekeke ukuba sikhokhele namalayisense okumba. Ilayisense yokuthelela ithilagi iyizi-R8000 ngonyaka. Kuthi eyelayisense yokumba ibe yizi-R150 000 ehlala izinyanga ezingama-24 ebese iyavuselelwa,” kuzikhalela uMnu uDlamini.
UMnu uMbulelo Buthelezi naye ufakazele ozakwabo ekhala ngokuxhashazwa ngosomabhizinisi bamaNdiya.
“Izinkampani zamaNdiya okuthiwa kumele aboHlanga bangene ngaphansi kwazo kubalwa kuzo iYC Naidoo, iMandlezethu Properties kube iGrow All zonke ezisebenzela eLovu, iDixon Africa esebenzela eMzinto, neConcrete 2000 Pty Ltd esebenzela eMkhomazi.”
UMnu uButhelezi uqhuba uthi: “Mfowethu ngowezi-2014 ngesikhathi sisungula inhlangano yethu Ubumbano Logistix sisazamile ukulwisana nale nkohlakalo eyenziwa ngamaNdiya kwaboHlanga kodwa amaNdiya avele alanda osomatekisi baseSiphingo abakhokhela imali ukuba basesabise ngokusibulala uma siqhubeka nokuhlukumeza amaNdiya. Umhlangano wethu wokuqala sawubambela emahhovisi akwaMasipala eSiphingo,”
UMnu uButhelezi uphinde wakhala ngamanye aMakhosi nezinduna ezithile ukuthi nabo banesandla ekudayiseni osomabhizinisi boHlanga emaNdiyeni.
“Phela amaNdiya abagwazela ngotiki ukuze bawavumele ukuba azomba isihlabathi nenkwali ezindaweni zawo ekubeni kulezo ndawo kusuke kade kusebenza aboHlanga kanti futhi iningi lala maNdiya awanazo nezimvume zokumba. Sinxusa ihhovisi le-Ingonyama Trust Board (ITB) okuyilona elibhekelele umhlaba weNgonyama ukuba lingenelele ukuvikela aboHlanga ekuxhashazweni ngamaNdiya kule mboni yezokumbiwa kwesihlabathi,” kuqhuba uButhelezi.
UMnu uButhelezi wexwayise ngokuthi uma nalo ihhovisi le-ITB lisindwa zinyawo sekungase kugobhoze igazi ezweni. “Asikwazi nathi ukuhlala sigoqe izandla umnotho wethu udliwa ngezinye zizwe. AmaNdiya awabuyele ezindaweni zawo nathi basiyeke ezindaweni zethu. Inkankane nenkankane alidle umsundu wangakubo,” kuphetha uButhelezi.
Indawo eMakhosini nobungcwele bayo kudala
Ukungena kodwendwe kuyisiqiniseko sokugcagcelwa